Blogyada ugu Wanaagsan ee WordPress ee Isbaanishka | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Blogyada ugu Wanaagsan ee WordPress ee Isbaanishka
Blogyada ugu Wanaagsan ee WordPress ee Isbaanishka
WordPress ayaa sanado badan hogaaminaysay aduunka blogging. Waad ku mahadsantahay fudayddeeda adeegsigeeda, tiro badan oo plugins iyo adeegyo ah, iyo fursadaha badan ee wax ka beddelka iyo hagaajinta, la yaab maaha in malaayiin qof ay doortaan maalin kasta.
Bulshada WordPress waxay ku baahsan tahay adduunka oo dhan. Isticmaalayaasha adduunka oo dhan, oo leh luqado badan, ayaa isticmaala WordPress oo raadiya casharro iyo faallooyin joogto ah.
Iyadoo Isbaanishka uu yahay luqadda labaad ee ugu caansan adduunka, waa dabiici kaliya in blogyada qaarkood ay diiradda saari doonaan nichen gaarka ah. Maqaalkan, waxaan ku baran doonaa wax badan oo ku saabsan 10ka bog ee ugu wanaagsan ee lagu barto WordPress ee Isbaanishka.
Blog-gani waxa uu jiray in ka badan 13 sano waana mid ka mid ah baloogyada ugu firfircoon liiskayaga.
Tan iyo markii la bilaabay Oktoobar 2012, ReInSpirit waxay bixinaysay macluumaad ku saabsan dhammaan dhinacyada WordPress oo ay ku jiraan tayaynta SEO, naqshadaynta shabakadda, falanqaynta, iyo aaladaha WordPress.
Iyadoo in ka badan 4.5M booqashooyin bishii, Behmaster waxay siisaa akhristayaasha Isbaanishka mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee WordPress.
Blog-gani waxa uu inta badan diiradda saaraa codeyaynta gudaha WordPress. Ka fiirso koodka iyo casharrada si aad uga dalbato bloggaaga.
Ma xiisaynaysaa eCommerce? Woodemia waxay bixisaa koorsooyin iyo casharro diiradda saaraya inta badan eCommerce gudaha WordPress.
Blog-gani waxa uu la wadaagaa tabo, casharro, hagitaanno, qaybo kooban, talooyin, warar, waraysiyo, iyo wax kasta oo kale oo la xidhiidha WordPress.
WordPress Directo wuxuu diiradda saarayaa wararka WordPress isagoo sidoo kale bixinaya dhammaan noocyada agabka si kor loogu qaado blog kasta oo WordPress ah.
Annagu waa shirkad
Haddii aad raadinayso hagaha WordPress, tixgeli Webempresa.
Blog-gani waxa uu diiradda saarayaa plugin iyo waxa ku jira horumarinta.
Haddii aad rabto inaad hesho wararkii ugu dambeeyay ee WordPress iyo dhammaan noocyada macluumaadka ku saabsan isticmaalkeeda, codsiyadiisa, talooyinka, iyo koodka, eeg WordPress' Blog.
Ayuda WordPress waxay online ku jirtay in ka badan 13 sano waana mid ka mid ah blogyada ugu firfircoon ilaa maanta. Waxay siisaa akhristayaasha macluumaad badan oo ku saabsan cusbooneysiinta WordPress. Waxaa intaa dheer, waxay bixisaa xalal arrimaha in badan oo isticmaala WordPress caadiga ah laga yaabo inay la kulmaan marka ay blogging.
Blog-gani waxa uu leeyahay in ka badan 150,000 oo booqasho bishii, oo asal ahaan ka yimid Spain. Waayadan dambe, si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale sii kordheysay saameynteeda Koonfurta Ameerika.
ReInSpirit waxa ay bixinaysay macluumaadka ku saabsan hagaajinta SEO, naqshadaynta shabakada, falanqaynta, iyo agabka WordPress ilaa Oktoobar 2012.
Waa mid ka mid ah boggaga internetka ee ugu faahfaahsan WordPress waxayna daboolaysaa dhinac kasta oo horumarinta ah WordPress nuxurka. Waxay haysataa ilaa 50k booqasho bishii, iyada oo inta badan taraafikada ay ka timid raadinta dabiiciga ah.
Behmaster waxay siisaa tiro aad u badan oo agab iyo casharro ah isticmaalayaasha WordPress. Naqshadeeda nadiifka ah ayaa ka caawisay in ay noqoto maya. 64 qaybteeda waxayna soo saartaa ilaa 4.5M booqashooyin bishii.
Ilaa hadda waa mid ka mid ah blogyada ugu fiican liiskayaga. Tani waxay inta badan sabab u tahay nuxurkeeda kala duwan iyo kuwa aqoonta leh, iyo sidoo kale waxqabadkeeda xooggan. Inta badan taraafikada waxay ka timaaddaa Maraykanka waxayna siisaa taageero iyo rukhsad booqdeheeda, iyo sidoo kale suurtogalnimada martigelinta iyo shaqaaleysiinta xirfadlayaasha.
Decodecms waxay ku siinaysaa aragti ka duwan awoodaha WordPress. Waxay diiradda saartaa codeeynta, bixinta koodhadhka iyo casharrada isticmaaleyaasha si ay ugu dabaqaan balooggooda.
In kasta oo bloggu aanu ahayn degelka saaxiibtinimo ee ugu isticmaalka badan, haddana waxa ay siisaa xalal badan kuwa doonaya in ay wax yar ka sii qodaan adduunka codaynta. Waxay online ku jirtay ku dhawaad ​​5 sano waxayna si joogto ah u soo saartaa waxyaabo tayo leh akhristeyaasheeda.
Woodemia waa baloog qurux badan oo loogu talagalay in lagu wadaago macluumaadka ku saabsan eCommerce gudaha WordPress. Halkan waxa aad ka heli kartaa koorasyo ​​iyo dhammaan noocyada casharrada loo dhisay si aad uga dhigto mareegtaada ecommerce mid soo baxda.
Waa baloog da'yar oo tayo sare leh oo leh in ka badan 65k booqdayaal bishii iyada oo in ka badan 90% ay ka yimaadeen raadinta.
Desarrollowp waa baloog wadaaga khiyaamada, casharrada, hagitaannada, qaybo yar yar, talooyin, warar, waraysiyo, iyo wax kasta oo kale oo la xidhiidha WordPress.
Waxay online ku jirtay ilaa 2015, iyo, in kasta oo ay wali waddo dheer u leedahay dhammaystirka khibradeeda isticmaale, waxay bixisaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhammaystiran oo kala duwan ee la xidhiidha WordPress.
WordPress Directo waa baloog aad u nadiif ah, oo diiradda saaraya ka warqabka booqdayaashiisa wararka WordPress. Waxa kale oo ay bixisaa dhammaan noocyada agabka si kor loogu qaado blog kasta oo WordPress ah.
Waa baloog aad u firfircoon, oo daabacaya ugu yaraan 1 boosto todobaadkii. Waxa intaa dheer, waxay ku fiican tahay bilowgayaasha!
Webempresa waa baloog kale oo si wanaagsan loo dhisay oo bixisa hagayaal kuwa u baahan in yar oo cawinaad ah shabakadooda.
Waxay ku jirtaa kaalinta 81 adduunka qaybteeda, waxayna ku dhowdahay hal milyan oo booqasho bishii. Waxay leedahay naqshad fudud, qurux badan, iyo saaxiibtinimo taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah blogyada ugu sarreeya ee ku saabsan WordPress.
Enrique J Ros waa blog ay ka buuxaan macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan WordPress. Nuxurka ugu muhiimsan wuxuu diiradda saarayaa bixinta plugin iyo nuxurka horumarinta. Waxay online ku jirtay ilaa 2016 waxayna leedahay in ka badan 70,000 oo soo booqda bishiiba. Inta badan gaadiidkeedu waxa ay ka yimaadaan Isbayn waana organic.
10. Blog-ga WordPress
Dabcan, Blog-ka Isbaanishka ee WordPress.org waa mid ka mid ah aaladaha WordPress-ka ugu dhameystiran ee halkaas ka jira. Waa blog si joogto ah u koraya oo leh in ka badan 25M booqashooyin bishii.
Halkan, waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee WordPress iyo dhammaan noocyada macluumaadka ku saabsan isticmaalkeeda, codsiyada, talooyinka, koodhadhka, iwm.
Waxaan daboolnay waxa aan u malaynayno inay yihiin 10ka bog ee WordPress ugu sarreeya ee Isbaanishka. In kasta oo baloog kastaa bixiyo nuxur u gaar ah, waxaan hubnaa inaad heli doonto mid ku habboon baahiyahaaga.
Ma la kulantay blog-yo kale oo WordPress ah oo Isbaanish ah? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose.
SEO: Keyword Research for Content Product
Transferito: Wareejinta WordPress fudud & Socdaalka